घर / ब्लग / बाथरूमको "उच्च मूल्य", अति आश्चर्यजनक, तपाईको दिमागमा आदर्श प्रकार छ?
2021 / 04 / 10 वर्गीकरणब्लग 975 0
बाट: मिलान डिजाइन टूर
हाम्रो घरको जीवनमा बाथरूमले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ, र यसको व्यवस्था र डिजाइन पनि हाम्रो स्वास्थ्यसँग नजिकबाट सम्बन्धित छ। २०२० मा रंगीन बाथरूम प्रवृत्तिको स्वरको आधारमा, २०२१ मा बाथरूमको प्रवृत्ति अझ विस्तृत छ: डिजाइन अधिक र अधिक सरल हुँदै गइरहेको छ, उदाहरणका लागि, केही कम से कम स्वतन्त्र बेसिन डिजाइन प्रयोग हुनेछ; रंगीन बाथरूम उपकरण, बेसिन, faucets, शौचालय र यस्तै।
विगतमा, बाथरूम डिजाइन, मूल रूपमा ठूलो ढु stone्गा बन्ने, तिनीहरू मध्ये धेरै कालो, सेतो, खैरो तीन रंग योजना, तर फेसन परिवर्तन संग, मान्छे को सौंदर्यशास्त्र पनि परिवर्तन भएको छ, अधिक मालिकहरु बाथरूम बनाउन को लागी केहि व्यक्तिगत पर्खाल रंग छान्छन् ।
विश्व डिजाइन चरणमा बाथरूम ठाउँको भविष्य: बाथरूम अब एकान्त, निजी ठाउँ हुनेछैन, घरको पछाडि लुकेको। वास्तवमा यो बेडरूम वा अन्य कोठामा जोडिएको छ, र बगैंचा र पानीको प्रवाहको बीचमा पनि एक सीमा क्षेत्र हुन सक्छ।
डिजाइन दृश्य र बाथरूम सजावट रचनाहरूमा ध्यानपूर्वक अवलोकन गरिएको एक प्रवृत्ति हो कि अधिक र अधिक डिजाइनरहरू कुनै न कुनै बनावट र प्राकृतिक उपस्थितिको केन्द्रबिन्दु खोज्दैछन्। ती चट्टान, ढु stones्गा र सामग्रीहरूको असभ्य प्रकृतिले हाम्रो उच्च-गति, उच्च-टेकको जीवनमा प्राकृतिक र सन्तुलित स्पर्श ल्याउँदछ, हाम्रो इन्द्रियलाई उत्तेजित पार्छ।
आज डिजाइनरहरूको समक्ष राख्ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको विलासिता र स्टाइलको त्याग नगरी कसरी सानो स्तरको जीवनयापन गर्ने? विश्वको शहरीकरणको अभूतपूर्व विकास र आवासको सीमितताहरूले यस प्रश्नलाई समेट्छ र रोचक रचनात्मक सम्भावनाहरूको प्रस्ताव गर्दछ।
अघिल्लो :: थाहा छैन कसरी बाथटब छनौट गर्ने? यी Mod१ मोडेलहरूले तपाईंलाई प्रेरणा दिन्छन् अर्को: बाथरूम पुन: निर्माण, G स्ट्रोक एक भव्य रूपान्तरण प्राप्त गर्न